Espoirs Sportifs de Tuléar: Tsy
mbola nahazoana valiny, hatreto, ny fangatahana alalana
amin’ny fanavaozana ny kianjan’ny prefektiora Toliara, raha ny
nambaran’ny filohan’ny fikambanana Est. Araka ny efa nolazainy,
nandrasana hatramin’ny faran’ny volana aogositra io valiny io
ka efa niroso amin’ny fanavaozana kianja hafa ny mpisehatra any
an-toerana. Raha ny fandehan’ny asa amin’izao fotoana izao, ny
kianja basikety ao Anketa izao ny imasoan’ny fikambanana ary efa
mitady izay fanamboarana hafa tokony hatao ny
Cours des dirigeants Sportifs:
Niditra tamin’ny andro faharoa, omaly, ny fiofanana ho an’ny
mpitantana fanatanjahantena, karakarain’ny Komity olympika
malagasy. Niditra lalindalina kokoa ny mpampiofana, ny tale
Ramaroson Ratoaviniriana. Ho an’ny anio kosa, ny atrikasa ny tena
hifantohana, raha ny fanazavana hatrany. Fanaovana fanadinana sy
fizarana mari-pankasitrahana kosa ny hatao ho amin’ny rahampitso
hanakatonana tanteraka ny fiofanana, andiany voalohany amin’ity
taona 2020 ity.
Banky sy ambaratonga ambony: hisy ny lalam-piofanana vaovao
62,5 % ny tanora tsy ampy fahaiza-manao eo amin’ny asan’ny banky. Antony lehibe nahatonga ny Association professionnelle des banques (APB) miara-miasa amin’ny IST (Institut supérieur de technologie) Antsiranana sy ny oniversite Antananarivo (sampam-pianarana toekarena, fitantanana) hanofana tanora ho matihanina ho an’ny banky amin’ny fandraisana mpanjifa sy ny fanomezana torohevitra (Conseil et gestion de la clientèle). « Mila ezaka betsaka ny amin’io sampanasa io hifandraika amin’ny tinadin’ny banky hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa », hoy Rakotobe Mamy, avy ao amin’ny BNI.Mitaky fandraisana mpiasa vaovao sy mahay ny hanokafana izao lalam-piofanana vaovao izao any amin’ny IST Antsiranana sy ny oniversite Antananarivo, noho ny fitombon’ny asan’ny banky eto an-toerana. Iarahan’ireo ambaratongam-pianarana ambony roa ireo sy ny APB ny mandray ireo mpianatra amin’ny alalan’ny fifaninanana, mitohy amin’ny fampianarana sy ny fanofanana. 50 ny horaisina amin’ny andiany voalohany. Manome toky ny APB amin’ny fanampiana sy ny fandraisana ireo tanora. Tamin’ny taona 2017, tanora 300 ny noraisin’ny APB.Manohana vola ny AUFManohana vola izao lalam-piofanana vaovao izao, mandritra ny telo taona, ny Agence universitaire de la francophonie (AUF). Hisian’ny fampandrosoana maharitra ny hitondran’ny AUF fanampiana vola amin’ny fiaraha-miasan’ny APB, ny IST Antsiranana sy ny oniversite Antananarivo ho an’ny filàn’ny tontolon’ny toekarena ankehitriny. Anatin’ny fifanarahana, homen’ny APB tambin-karama ireo manaraka fiofanana fampiharana asa maharitra 32 herinandro ka mandray anjara ny BMOI, ny BNI, ny Société Générale, ary ny Accès Banque.Natao, omaly, ny sonia fiaraha-miasa eo amin’ny filohan’ny APB, i Alain Merlot, avy ao amin’ny BMOI, sy ny avy amin’ny IST Antsiranana ary ny oniversite Antananarivo. Mitaky fahaiza-manao sy matihanina ny banky amin’izao fivoaran’ny teknolojia izao. Maro karazana ny tolotrasa ao amin’ny banky fa karazany iray ny fandraisana ny mpanjifa, nanokafana lalam-piofanana vaovao izao.R.MathieuL’article Banky sy ambaratonga ambony: hisy ny lalam-piofanana vaovao a été récupéré chez Newsmada.
Tompondaka amin’ny matematika: notoloran’ny minisitra fitaovana Ravelonirina S
Noraisin’ny minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana momba ny siansa, i Rejo Fienena Felicitée, omaly teny amin’ny birao fiasany eny Fiadanana, ny profesora Ravelonirina Hanitriniaina Sammy Grégoire, mpampianatra mpikaroka ao amin’ny oniversiten’Antananarivo. Izy no Malagasy tompondaka eran-tany tamin’ny fifaninanana matematika “algèbre de Lie”, tamin’ity taona ity. Nahatratra 98 ireo firenena nandray anjara tamin’izany fa mendrika indrindra tamin’izy ireo ny tenany. Voninahitra lehibe ho an’ny Malagasy iray manontolo izao fandreseny izao. “Voaporofony fa manam-pahaizana sy tsy mena-mitaha amin’ny any ivelany isika Malagasy”, hoy ny minisitra. Nanolotra « ordinateur portable » ho azy ankoatra ny “certificat” sy medaly ary ireo loka hafa miandry azy ny minisitra.Vonjy L’article Tompondaka amin’ny matematika: notoloran’ny minisitra fitaovana Ravelonirina S a été récupéré chez Newsmada.